Faroxumeynta galmada oo looga hadlinin iskuulada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waris Cadceed, erdey dhigata iskuul ku yalaa Norrköping. Foto: Foto: Lisen Elowson Tosting/Sveriges Radio
Publicerat tisdag 23 augusti 2016 kl 10.58
Iskuulada waa meelaha ugu daran oo da’yarta loogu geysto faroxumeyn sida lagu sheegay warbaxin dhawaan ka soo baxday boliska. Hey’adda skolverket iyada waxay sheegtay in iskuulada ay aad uga dib dhacsanyahiin shaqada ka hortagga faroxumeynta ka dhacda iskuulada
Helena iyo Bella oo ah da’yar 16 jiro hadda bilaabay fasalka labaad iskuulka 16 år och Polhemsgymnasiet magaalada Göteborg ayaa aaminsan in aan arrimahan looga ahdlinin iskuulka.
– Sidas loogama hadlo arrimahan, ayey tiri Helena.
– Saxiib hadaad la tahay wiil oo uu ku taabsado sidaas loogama sii fikero, sababtoo ah waa wax caadi ah. Sida badanaa dadka sheegan, ayey tiri
Dhibatada la xiriirta faroxumeynta galmo ee ka dhacda iskuulada ayaan aheyn wax sidaas looga hadlo iskuulda dhexdooda. Waa haddii markas aysan jirin dhacdo faroxumeyn oo markas maamulka iskuulka uu ka warhelay.
– Nasiib xumo arrimaha gilgilashada laga sameeyo waa ka dabotag, waxaa laga gilgilshaa markey wax dhacaan, ayuu yeri Hugo Wester oo ah oo ah la taliye dhanka tacllinta u qaabilsan hey’adda Skolverket. Waxuu sidoo kalea sheegay in sikullada degmooyinka ay dib ka jirto shaqada ka hortagga faroxumeynta galmo ee sikuulada.
– Waan in shaqadan ka hortagga la bilaabo ka hor inta aysan dhacinin faroxumeyn galmo. Badanaa waxa ciolmi baarista lagu sheegay caadi ka dhigidda faroxumeynta galmo ay sababto falalka dembiyo ee ka dhaca goobaha guud, ayuu yeri Hugo Wester.
Waaxda boliska u qabilsan dabogalka NOA ayaa gu’gi soo saartay warbaxin ka hadlaysa faroxumeynta galmo ee loo geysto d’ayarta kadib markii ay dood badan ka dhalatay xadgudubyo galmo oo ka dhacay banhdig xafladeedka We are Stockholm.
Warabaxinta boliska ayaa sawir guud ka baxineysa dhibaatadan. Boliskana waxuu si gooni ah ugu kuurgalay dacwado ay soo gudbiyeen da’yar 17 sanno jiro ah shantii sanno ee ugu dembeysay.
Laga soo bilaabo ssannadkii 2011 illaa iyo sannadkan 2016 dwacdo faroxumeyn oo ka badan 10705 oo dhallinyaro loo geystey ayaa bolsika loo gudbiyey.
Xadgudubyada galmo intooda badan waxaa loogu geystaa dhallinyarada aaladaha bulshada ku sheekeysato ee Social Medai.
Goobta keliya toos loogu kulmo oo dhallinyarada loogu geysto faroxumeynta galmo waa iskuulka, waxaan boliska loo gudbiyey dacwado kor u dhaafaya 1081 oo dacwadood.
Halka goobaha lagu qabto bandhigyaada xafladeed dacwadaha faroxumeyn ee bolsika loo gudbiyey ay yahiin 119 oo dacwadood keliya shantii sanno ee ugu dembeysey.
Hadda oo ay taagan tahay doodo ka dhashay faroxumeynta ka dhacday bandhigyada xafladaha ayuu rajeynayaa Hugo Westerberg oo Skolverket ka socda in doodan ay soo kordhiyaan isbaddel.
– Rajadeena waxay tahay in sidoo kale laga hadlo caqabadaha ka jira iskuulka markii haddii ariintan tahay wax hadda laga doodayo, ayuu yeri Hugo Wester.
Helena iyo Bella oo hadda bilaabeyn fasalka labaad dugsiga sare ayagana waxay aamisan yahayiin loo baahanyahay in laga hadlo dhibaatada faroxumeyn ee ka dhacda iskuulka.
– Wey fiicantahay in gabhdaha arrintan la ogeysiiyo wiilashada garashdooda kor loo qaado oo loo sheego in aysan banaaneyn gabdhaha in taabsadan, ayey yiraahden.